Motorola One 5G Ace: atụmatụ, ọnụahịa na nnweta | Gam akporosis
Motorola One 5G Ace, igwe eji ebugharị ọhụrụ na Snapdragon 750G na 5000 mAh batrị
Lenovo, elekere ole na ole gara aga, weputara ụzọ ọhụụ atọ nke smartphones dị ala na etiti. Nke a mebere ọnụ ala Moto G Stylus (2021), Moto G Power (2021) na Moto G Play (2021), nke o kpughere dị ka akụkụ nke ezinụlọ ya ọhụrụ na usoro G maka afọ a ... Ọnụ, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara ekwentị ọhụrụ ọzọ, nke ekpughere dị ka Motorola Otu 5G Ace.
Ezubere ngwaọrụ a maka otu ahịa, nke bụ United States na Canada. Agbanyeghị, nke a nwere ike ịbụ naanị na mbido wee nyefee ekwentị na mpaghara ndị ọzọ. A kọwara nkọwa niile nke ya n'okpuru.
1 Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke Motorola One 5G Ace ọhụrụ
Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke Motorola One 5G Ace ọhụrụ
Ihe mbụ anyị nwetara na ama a bụ ihe ngosi pụrụ iche, mana nke ahụ adịchaghị njọ, ihe megidere ya. Nke a mejupụtara ihuenyo zuru oke nke na-ekpuchi ihe niile dị na ihu ihu ka ọ na-ejide ya na oke bezels wee bịa na oghere nke nwere isi igwefoto.
Mgbe ahụ, anyị nwere mpempe akwụkwọ plastik nwere mkpuchi ederede nke na-enyere aka dị mma n'aka. N'ebe a, anyị nwekwara modulu igwefoto bụ isi nke dị na akuku aka ekpe ya, ya na onye na-agụ akara mkpịsị aka ya. Na miri emi, abịa na isi shooter esịnede 48 MP mkpebi ma ọ na-esonyere oghere 8 MP maka oghere sara mbara maka foto sara mbara yana ihe mmetụta 2 MP maka foto macro. N'ezie, modul ahụ na-eme ihe ngosi LED nke na-achọ ịkọwa ọnọdụ ndị kachasị njọ ma jee ozi dị ka ọkụ mgbe ọ dị mkpa.
Ihuenyo nke Motorola One 5G Ace na-etu ọnụ bụ teknụzụ IPS LCD ma nwee nnukwu 6.7 inch nke jikọtara ya na FullHD + mkpebi nke 2.400 x 1.080 pikselụ, na-ebute usoro ngosi ngosi 20: 9. Nke a nwere oghere anyị kwurula, nke nwere ihe ndozi n'ihu n'elu panel ma 16 MP. A na-ejikarị sensọ arụ ọrụ ihu na ihu nke Artificial Intelligence na njirimara ndị ọzọ na-akwado.
N'aka nke ọzọ, maka chipset processor nke ama dị n'etiti, anyị nwere Qualcomm Snapdragon 750G, ikpo okwu mkpanaka nke nwere okpukpu asatọ na oge elekere nke 2.2 GHz. Akụkụ a jikọtara ya na ihe ngosi Adreno 619 processor processor (GPU). Na mgbakwunye, na ụdị a, ejikọtara ya na ebe nchekwa 4 ma ọ bụ 6 GB Ram na nchekwa dị n'ime. ohere nke 64 ma ọ bụ 128 GB nke nwere ike ịgbasa site na kaadị nchekwa microSD.
Ekwentị nwere nguzogide mmiri nke IP52 ọkwa ma tụọ gram 212, nke kachasị n'ihi batrị ọ na-eji, nke bụ ihe dị ka 5.000 mAh ike ma nwee ike inye nnwere onwe karịrị otu ụbọchị na iji ya eme ihe, nke nwere ike ịtụgharị n'ihe dị ka 7 ma ọ bụ 8 awa nke ihuenyo, ihe anyị ga-elele ma emechaa. Enwekwara nkwado maka ngwa ngwa 15W ngwa ngwa site na ọdụ ụgbọ USB Type-C.
N'aka nke ọzọ, Motorola One 5G Ace kwadebere ya na gam akporo 10 sistemụ arụmọrụ n'okpuru Motorola's My UX user interface. Ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche gụnyere nkwado maka 5G NA na njikọta NSA, Bluetooth 5.1, GPS na Dual Wi-Fi, nke na-enye anyị ohere ijikọ na netwọk 2.4 na 5 GHz.
Emeela smartphone ọhụrụ ahụ na ahịa North America (Canada gụnyere), dịka anyị gosipụtara na mbido. N'oge a, anyị enweghị ozi ọ bụla gbasara ma a ga-enye ya n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa dịka Europe ma ọ bụ Latin America, mana amaara na Ọ nwere ike zụta na United States ka nke Jenụwarị 13 maka ihe ukara ere price nke $ 399.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Motorola One 5G Ace, igwe eji ebugharị ọhụrụ na Snapdragon 750G na 5000 mAh batrị
Ihe niile dị ọhụrụ na PUBG Mobile update 1.2 - patch Notes na nkọwa
[Na vidiyo] Otu esi eji ọkwa ọhụụ ọhụrụ UI 3.0 na WhatsApp